धेरै नै सुन्दर हुन्छन् यी राशिका युवतीहरु, साथै आकर्षित पनि ! कुरो कत्तिकाे मिल्छ? हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > गसिप > धेरै नै सुन्दर हुन्छन् यी राशिका युवतीहरु, साथै आकर्षित पनि ! कुरो कत्तिकाे मिल्छ? हेर्नुस्
admin November 20, 2020 November 20, 2020 गसिप, जीवनशैली, रोचक	0
सुन्दर जे सुकै देखे पनि खुशी रहने मानव जतिको स्वभाबनै हो। अझ आफ्नो प्रेमिका-श्रीमती सुन्दर परोस् भन्ने सम्पूर्ण पुरुष जतिको चाहना हुने गर्छ। ज्योतिषशास्त्र अनुसार विभिन्न राशिका छुट्टै विशेषता हुने गर्दछन् भने आनी-बानि देखि लिएर धेरै कुराहरु राशिले निर्धारण गर्ने हुन्छ। पुरुषलाई भुतुकै बनाउने सुन्दरता साथै गुणले भरिपुर्ण रहने ३ राशी ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ। आज हामी तपाईलाई कुन राशिका महिलाहरु अत्याधिक सुन्दर साथै आकर्षक रहने गर्छन्,
यस बारे जानकारी गराउने छौं। यी राशिका महिलाहरुको मुहार मात्र सुन्दर नभएर चरित्र समेत आकर्षक हुने गर्दछ। वृश्चिक राशि :वृश्चिक राशिमा महिलाहरु सुन्दर मुहारको अलावा मिठो बोलिका कारण पनि चर्चामा रहने गर्छन्। कुनै पनि पुरुषलाई आकर्षित गर्ने क्षमता रहने यस राशिका महिलाहरु बोलीको मिठो बाड समेत छोड्ने गर्छन्। हल्का जिद्दी रहने भएता पनि यस राशिका युवतीहरुको जिद्दीपनले समेत पुरुष आकर्षित गर्ने गर्छ।
मिथुन राशि:यस राशिका महिलाहरु प्राय मिजासिला हुने गर्छन् भने सुन्दरतामा पनि केहि खोट नभएका हुन्छन्। आफ्नो स्वभावका कारण आकर्षित रहने यस राशिका युवतीहरुमा उमेर बढ्दै जाँदा सुन्दरता बढेर जाने गर्छ। अत्यधिक सुन्दर रहनाले धेरै पुरुषहरु यस राशिका युवती तिर खिचिने गर्छन्। तर यस राशिका महिलाहरु हल्का क्रोर भने जरुर रहन्छन्।
वृष राशीवृष राशिका महिलाहरु सुन्दरताले जो-कोहीलाई ओअनी मुर्छित पर्ने क्षमता राख्छन्। शान्त स्वभाव रहने यस राशिका महिला अथवा युवतीहरु लजालु स्वभावका हुनाले पनि पुरुषहरु आकर्षित हुने गर्छन्। बुद्दिमानी समेत रहने यस राशिका महिलाहरु प्राय आफ्नो शर्तमा जिद्दी रहने गरेता पनि बुज्जकी हुनाले पुरुषहरु आकर्षित रहने गर्छन्।
सुन्दर मुहारको अलावा मिठो बोलिका कारण चर्चामा रहने यस्ता युवतीहरूले कुनै पनि पुरुषलाई आकर्षित गर्ने क्षमता रहने मात्र नभै उनिहरूकाे बोलीको मिठो बाँण समेत छोड्ने गर्छन्। साथै यी राशिका युवतीहरू गुणले भरिपुर्ण रहने ३ राशी ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ।
भाइरल बन्दै कवाडीवाली जनकपुरकि १३ बर्षिया रूक्सानाः खै कहाँ छ ‘बेटी पढाऊँ, बेटी जोगाऊँ’